China Dongshen ọkachamara etemeete ogbo dobe udi latex-free Pu ntọala etemeete mma ogbo blender Onye na-emepụta ihe na onye na-eweta ngwaahịa | Dongmei
Dongshen ọkachamara etemeete ogbo dobe udi latex-free Pu ntọala etemeete ịma mma sponge blender
Dongshen ọkachamara etemeete na ịma mma sponge blender, mara mma nke nwere udi, latex na-enweghị etemeete sponge blender bụ nke ejiri PU mee, enwere ike iji ya maka akọrọ na mmiri, anaghị eri ntụ ntụ, etemeete na-enwe mmetụta siri ike ma nwee ihu akpụkpọ, ma na-eme adịghị akpasu akpụkpọ ahụ iwe.
ER ỌRỤ NJIRI EZI 100%: Ihe eji achọ mma etemeete etemeete bụ nhọrọ kacha mma .Ọ bụrụ na ịchọta nsogbu ma ọ bụ aro ọ bụla na nke anyị etemeete ogbo blender, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị, anyị ga -enye nkwado ọkachamara na ọrụ n'ime awa 24.
Ụzọ abụọ eji sponge:
1. Jiri ihe ndị na -eme ka ihe dị mma gbanye ihe ịchọ mma ntụ ntụ,
dị ka ntọala, ntụ ntụ, blusher, isi ihe, onyinyo anya, ndo ngagharị wdg.
2. Tee nke ọma n'elu ogbo ogbo.
3. Kwụsị ntụpọ ozugbo na ihu gị iji mepụta ọdịdị etemeete eke.
1. Sịn ya na mmiri ọkụ mgbe ị na -eji ya, ka sponges etemeete agbasawanye, pịpụta mmiri ọzọ.
2. Itinye akwụkwọ maka mmiri ara ehi, ude ma ọ bụ ihe ịchọ mma mmiri, dị ka ntọala mmiri mmiri, ude mmiri BB, ude CC, ihe mkpuchi anwụ, ihe mkpuchi etemeete wdg.
mmiri mmiri na ntụ ntụ ka mma ka ejiri sponges dị iche.
3. Eji nwayọọ kwaga ya iji belata ihe mkpofu na -enweghị isi.
1.Tinye ogbo ncha n'ime mmiri ncha dị nro wee pịa ya ka mmiri juo ya nke ọma, megharịa nke a ugboro 2-3, wee jiri nwayọ tee ya.
2. Sụọ mmiri n'ime ncha karịrị akarị, wee sachaa ya n'okpuru mmiri na -agba agba ruo mgbe ọ nweghị mmiri ara.
3.Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ịpịpụta mmiri mmiri na -emebiga ihe ókè, tinye ya na ihe njiri sponge ka ikuku kpoo.
Ọ ka mma ka a na -asacha nke ọ bụla iji zere nje bacteria.
Na-atụ aro kwa ọnwa 1-2 iji dochie ya.
Nke gara aga: Ahaziri ahaziri ahaziri onwe ya n'ùkwù 12pcs rose etemeete ahịhịa setịpụrụ ntụ ntụ ime ihi ihe na -egosipụta nkuanya nku anya na -agwakọta ngwa ọrụ ihe ịchọ mma.
Osote: Dongshen N'ogbe etemeete ogbo latex-free oblique bee dobe ekara ntọala rụrụ ntụ ntụ etemeete mma ogbo blender
Blender Mma Mma
Ngwá Ọrụ Nchacha etemeete, Ịkpụ afụ ọnụ, Mee Ncha, Ntọala ịkpụ afụ ọnụ, etemeete ahịhịa setịpụrụ, Nịm etemeete ahịhịa,